သူတို့သံယောဇဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » သူတို့သံယောဇဉ်
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on May 31, 2012 in Photography | 39 comments
ချင်ပင်ဇီလေးဟာ မွေးမွေးချင်းအမေသေသွားလို့ တိရိစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်းတွေက ခွေးမကြီးဆီပို့ထားပြီး ခွေးလေးတွေနဲ့အတူတူစောင့်ရှောက်ခိုင်းထားတာ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ ချင်ပင်ဇီလေးက ခွေးလေးတွေနဲ့ခွေးမကြီးကို သူ့အမေနဲ့ သူ့မောင်နှမတွေလို့ထင်ပြီး ခွေးလေးတွေလိုလိုက်လုပ်နေတာ။ ချစ်ဖို့ကောင်းသလို သူတို့ရဲ့သံယောဇဉ်ကိုလဲ ခံစားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ ဘ၀တွေ သဘာဝတွေဟာ မတူဘူးဆိုတာ သိလာကြတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ သံယောဇဉ်ဟာတော်တော်ကို ခိုင်မာနေပုံရပါတယ်။ မေးထဲရောက်လာတဲ့ပုံလေးတွေကို ခံစားရလို့ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ။
မှန်၏ ရှမ်းလေးရေ။ ဒါပေမဲ့ လောကကြီးကိုမေတ္တာတရားများနဲ့ အမြဲဖန်တီး ထား နိုင် ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာ တွေနဲ့ပေါ့။
မတူတဲ့စရိုက် နှစ်ခုဆွဲစိထားသလိုပါလား။မေတ္တာဆိုတာ သတ္တဝါတွေထဲက
လူသားက ပိုတွေးတတ်ဖို့ လိုပါတော့လား။မမသဲနုအေးရေ အားပေးသွား
ပေါင်းစပ်လို့မရတဲ့ သဘာဝနှစ်ခုပေမဲ့ သံယောဇဉ်ကတော့ မျောက်ကလေးကပိုများနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
နေမြင့်လို့ အရူးရင့်ခဲ့တယ် ဒီသံယောဇဉ်……
ဒီမျောက်လေးက ခွေးအမေကြီးကို သူကလေးတွေ ထက်တောင်ပို ကပ်သလိုဘဲ။
အမေ့ လက်ကိုတောင် ကိုင်ထားလိုက်သေးတယ်၊
သနားစရာလေးဟယ်။ နက်ပီ (ဒိုင်ရာပါ) လေးနဲ့။
အောက်ဆုံးလက ပုံက ချစ်စရာလေးတွေ။
(အသဲလေးခေါ်မဲ့ မောင်ပေ မလာသေးဘူး။ )
ဟုတ်တယ်နော်အရီးလတ်။ ချစ်စရာလေး။ ဒိုင်ပါလေးက၀တ်ထားသေးတယ်။
ကိုပေက အသစ်တွေ့လို့ အဟောင်းမေ့သွားပြီထင်တယ်။ ဟီဟိ
မဟုတ်ဖူး အမအေး ။ ကပေက မနေ့ကကျောက်ဝိုင်းမှာ လိမ်လည်မှုနဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရလို့ ။ အာမခံမရလို့ အခု အချုပ်ထဲမှာ။ ဗိုက်ကလေးကတော့
သူ့မိန်းမနဲ့ အမွှာလေးနှစ်ယောက်တော့ သနားပါတယ်။
ဟုတ်ပ သဲလေး ရေ ၊ လူမှား တာဘာတဲ့ကွယ် ။ အဲဒါ ဂေဇက်က အမတစ်ယောက်တောင် ကိုပေ့ သတင်းကြားလို့ တဲ့ ၊ သွေးပေါင်တွေကျပြီး မစားနိုင်မသောက်နိုင်လောက်အောင် ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်သွားတယ်ကွာ ။ အခု ကိုပေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး သတင်းကြားသွားမှ ၊ သူ့ ခဗျာ အစားမှန် အအိပ်မှန် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘဲ ။ မေတ္တာတွေ မေတ္တာတွေ
ခွေးလေးတွေကတော့စဉ်းစားနေမလား မသိဘူး .. ငါတို့ ညီအကိုမောင်နှမတွေထဲ ဘယ်ကဘယ်လိုမျောက်နဲ့တူတဲ့ကောင် ပါနေပါလိမ့်လို့ … :grin:
အခုတော့မသိသာသေးပေမဲ့ ကြီးရင်တော့ တော်တော်လေးသိသာလာမယ်ထင်တယ်နော် ကိုထူးဆန်းရေ။
ခွေးလေးတွေစဉ်းစားနေက ငါတို့ကျတော့ ရူးရူးအတွက် ဘာမှလဲမရှိဘူးတဲ့။
အင်းအဲဂလိုဆို ထွင်ပေးရအုံးမှာပေါ့နော်။ ဟုတ်တယ်။ အိမ်မွေးခွေးလေးတွေအတွက် ဒိုင်ပါထုပ် အုံးမှ။ စီးပွားဖြစ်မယ်သိလား။ ခွေးခရေဇီတွေက သူတို့ခွေးအတွက် ဆိုဈေး ဘယ်လောက်ကြီးကြီး လာထားပဲ။
တလိတ်ဆန်ဒွေတောင် ဒီလိုချစ်ချစ်ခင်ခင် နေနိုင်ကြသေးရင် လူဒွေက ဘာလို့ မနေနိုင်ရမှာလဲ
အင်းဗိုက်ဗိုက်တို့များမူးနေတာတောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇဂါးပြောနိုင်သေးတယ်နော်။ ဆံပင်ဖွာရုံမက မျက်လုံးပါလည်နေဘီ။
အဲဒါပြောတာပေါ့မမသဲနုအေးရယ် တိရစ္ဆာန်တွေတောင် မေတ္တာတရားကြီးမားကြတယ်
လူဖြစ်ပြီး ကိုယ်ချင်းမစာတတ်တဲ့သူက အများသား
ဟုတ်ပါ့ညီမလေးရယ်။ ရန်ကုန်မြို့ထဲထွက်မိရင် အကုသိုလ်တွေနဲ့ပြန်ပြန်လာရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အန်တီအေးရေ …
အမ် ဂေါ်န ခေဲလ်း ယူ တို့ …
ကင်းရင် အတော် ကောင်းမယ် နော်…
အင်းမှန်ပါ့ဂီဂီရေ။ ကိုယ်တွေလဲ အဲဇဂါးနဲ့တောင်သိပ်မကင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နဲနဲတော့ပြင်လိုက်တယ်။ အိုင် မတ်စ် ခေဲလ်းယူ လို့ ဟီးးးးးးးးးး
အစ်မသဲနုအေးရေ ဓါတ်ပုံလေးတွေ မြင်ပြီး ကြည်နူးမိပါတယ် ။
မတူညီတဲ့ ဘ၀အခြေနေပေမယ့် ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ သံယောဇဉ် ဆိုတာ တဦးအပေါ်တဦး ထားကောင်းတဲ့ အရာပါလားလို့လည်း နားလည်မိပါတယ် ။ သာမန်အားဖြင့် လူ့လောက် အသိဥာဏ်မရှိတဲ့သတ္တ၀ါတွေ ၊ အမျိုးမတူတာတွေ့လျှင် ရန်လုပ်ဖို့လောက်ပဲ သိတာ ။ အခုလို ချစ်ခင်နေကြတာမြင်တော့လည်း …. ကြည်နူးရပါတယ် ။
မျောက်ကလေးကတော့ တွယ်တာစိတ်ပေါ့ …ငယ်ငယ်ကလေးနဲ့ မိခင်ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ ခွေးမကြီးနဲ့ အမျိုးတူလို့ ထင်နေပုံကြောင့် ခွေးမကြီးကို အမေလိုပဲ ခင်တွယ်နေတယ် ။
ခွေးမကြီးကတော့ မိခင်စိတ်ပေါ့ …. အမျိုးမတူတဲ့ သားမှန်း သိပေမယ့် …. ကရုဏာ ထားနိုင်တာ.. တကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါပဲ ။
ဟုတ်တယ်အိတုန်ရေ။ ဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီးခံစားရလို့ ပြန်မျှဝေလိုက်တာပါ။
ကျုပ်လည်း ကြည့်နူးမိရဲ့ဗျာ ..
အနေနီးသွားလို့ သံယောဇဉ်တွေဖြစ် ချစ်ခင်သွားကြတာလား ..
ဒါမှမဟုတ် အတိတ်က ရေစက်ကြောင့်ရယ်လားတော့ အတပ်မသိ …
ခုလို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဖြစ်နေတာလေးတွေကို မြင်ရတော့ ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ …
ဟေ့ .. ငဗိုက် ..
နာ့အမျိုးဒွေ ဘီလောက် ချစ်တတ်လဲ တွေ့ဒယ် မီဟုတ်လား ..
ခြောက်မျက်နှာရေ ညီးကတော့မျက်နှာများတော့သံယောဇဉ်ပိုများမယ်မှတ်တယ်။ အခုတလော ရင်တွင်းပျက် အဲလေ မွှားလို့ ရင်တွင်းဖြစ်တွေတောင်မဖတ်ရတာကြာပေါ့။
သဲလေးရေ ၊ ဒီပို့ စ်မှာ ကွန်မင့်တာ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ကိုပေ့ ကို ခွေးမလွှတ်လိုက်ဘာနဲ့ ကွယ်
ခွေးတော့ မလွှတ်ဘူး ..
ကျုပ်ခါးကြားက ဓါးမကြီးတော့ လွှတ်လိုက်ဖို့ ပြောနေတယ် …
လွှတ်လိုက်စမ်းပါဟယ် ..ခုတလော ဒင်းလည်း နဖူးပြောင်သလောက် ဘူးကြောင်နေလို့
သွေးတက်အောင် ဒံပေါက် ဒူးရင်းသီး ငါးသလောက် များများစားပါတယ်
ဓါးမကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့။ မီးပျက်နေလို့ မီးသွေးခုတ်ဖို့ထားပါ။ ငှက်ကြီးတောင်လောက်ဆိုတော်သေး။
ကိုပေ့မှာကလေး ၅ ယောက်ဆိုလား။
ဟုတ်ကိုပေ ခွေးတော့မလွှတ်ဘူး။ ကျားပဲလွှတ်လိုက်မယ်နော်။
မှတ်ချက် ကျား = ပုလင်းမဟုတ်ပါ။
သဲလေး စေတနာတွေ ကို ကိုပေ မြင်သွားရပါပြီကွယ်
သံယောဇဉ်လေးတွေ။ ခွေးမကြီးကလည်း မေတ္တာကြီးမားရှာပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့ eipu ရေ။ ဒို့လဲအတုခိုးသင့်တယ်နော်။ လွယ်တော့မလွယ်လှဘူးပေါ့။
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး တကယ်ကြည်နူးမိပါတယ်။ အတိတ်ဘ၀ ရဲ့ရေစက်တွေကြောင့် ဒီလောက်ချစ်